Xog: Odayaal dhaqameed caqabad cusub ku noqday madaxweyne Farmaajo - Caasimada Online
Home Warar Xog: Odayaal dhaqameed caqabad cusub ku noqday madaxweyne Farmaajo
Xog: Odayaal dhaqameed caqabad cusub ku noqday madaxweyne Farmaajo
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno Madaxtooyada Somalia ayaa sheegaya in Madaxweynaha dalka Maxamed C/llahi Farmaajo ay lasoo daristay Caqabado ku aadan dhanka isbedelka.
Wararku waxa ay sheegayaan in Madaxweynaha uu la tacaalaayo qancinta Beelaha Soomaaliyeed oo iyagu ku dhagan Shaqsiyaad lala damacsan yahay xil ka qaadis kuwaa oo lagu eedeeyay Isdabamarin iyo Musuq.
Shaqsiyaadka uu Madaxweynaha la damacsan yahay xil ka qaadista ayaa ka howlgala Villa Somalia iyo Hay’adaha amaanka.
Xafiiska Madaxweynaha ayaa waxaa buux dhaafiyay Odayaal dhaqmeedyo u doodaaya shaqsiyaadka lala damacsan yahay xil ka qaadista kuwaa oo Madaxweynaha laga dhaadhicinaayo inay yihiin kuwo ka caafimaad qaba Musuqa.
Sidoo kale, Shaqsiyaadka uu Madaxweynaha la damacsan yahay xil ka qaadista ayaa tirro ahaan lagu sheegay ilaa Lix ruux kuwaa oo Seddex kamid ah ay ka tirsan yihiin Villa Somalia, halka Seddexda kale ay yihiin Taliyayaal ciidan.
Lama oga sida uu Madaxweynaha ka yeeli doono Caqabadaha kaga imaanaya dhanka Odayaasha Beelaha oo habdhaqankooda uu horay u fashiliyay Qaranka.